Fri, Apr 27, 2018 | 06:28:21 NST
तेह्रथुम आइडलको तयारी सकियो
तेह्रथुम, साउन २२ – ‘तेह्रथुम आइडल’ गायन प्रतियोगिताको तयारी सकिएको छ । जिरिखिम्ति बजारमा आउदो शुक्रबार हुने अडिसनको तयारी पुरा भएको आयोजक फक्ताङ्लुङ सांस्कृतिक मञ्चले जनाएको छ ।
सर्जकको सम्पत्तिमा टेलिकमको दाईं
सूर्यकुमार क्षेत्री/उज्यालो । काठमाडौं, साउन २२ – कसैको मोबाइलमा फोन गर्दा गीत बज्यो भने सुन्दा एकछिन आनन्द लाग्छ । तर गीतलाई ‘रिङटोन’मा राख्दा सबैभन्दा बढी मजा चाहिँ टेलिकमलाई हुने गरेको छ ।
नेपथ्यले यसरी नचायो लण्डनमा (फोटो र भिडियो)
साउन, २० – नेपाली ब्याण्ड नेपथ्यले बेलायतको बेम्वलीमा सांगीतिक प्रस्तुति दिएको छ । बेलायतकै ठुलो वेम्बली एरेनामा भएको सांगीतिक कार्यक्रममा नेपाली ब्याण्ड नेपथ्यले शनिबार आफ्नो प्रस्तुति दिएको हो ।
सरल हृदयका चित्तधर
राजेन्द्र शाक्य/उज्यालो । काठमाडौ, साउन १९ – चित्तधर हृदय नेपालभाषा साहित्यका एक बहुआयामिक लेखक अनि थुप्रै अरू लेखकहरूका प्रेरणाका स्रोत । आफ्नो ७८ वर्षिय जीवनकालमा उहाँले झण्डै चारदर्जन उत्कृष्ट साहित्य सिर्जना गर्नुभयो।
एआर रहमानको गीतमा आनी छोइङको स्वर (भिडियो)
साउन १८ – टेलिभिजन च्यानल एमटिभीले चर्चित सांगीतिक कार्यक्रम कोक स्टुडियो एट एमटिभीको तेश्रो सिजन शुरु गर्दैछ । आउँदो अगस्त १७ तारिखदेखि शुरु हुने सांगीतिक सिजनमा भारत सहित र विदेशका चर्चित संगीत उत्पादक तथा कलाकारको जमघट हुनेछ ।
काठमाडौ, साउन १७ – जलन, आमाको माया, अंगरक्षक, जेठो कान्छो, नेपाल जस्ता फ्लप चलचित्र निर्माणको अनुभव उनीसँग छ । बढेमानको शरीर भएका ‘तितो सत्य’का ‘गैडा’ अर्थात निर्मल शर्माले यीनै अनुभबको आधारमा ‘चकलेट’ बनाउन लागेका छन् ।
सरोदवादनको एकल एल्बम सार्वजनिक
काठमाडौं, साउन १७ – शास्त्रीय संगीतलाई योग ध्यानको एक माध्यमको रुपमा स्थापित गर्ने क्रममा सरोदवादक सुदर्शन राजोपाध्यायको सरोदवादनको एकल एल्बम सार्वजनिक भएको छ ।
खैत मलाई अधिकार नयाँ नेपालमा ? (फोटो फिचर)
काठमाडौ, साउन १६ – समलिंगी तेश्रोलिंगीको कथा व्यथा र अधिकारका कुरा समेटेर तयार परिएको गीति एल्बम सर्बजनिक भएको छ । तीजको अवसर पारेर निकालिएको यो एल्बम समलिङ्गी तेश्रो लिङ्गीको आवाज समेटिएको पहिलो एल्बम हो ।
काजीराजको नेपाली र नेपालभाषाका एल्बम सार्बजनिक
काठमाडौ, साउन १४ – रचनाकार काजीराज शाक्यका नेपाली भाषाको ‘नौलो तरङ्ग’ र नेपाल भाषाको ‘आहा’ गीति एल्बम सार्बजनिक भएको छ । दुईवटै एल्बममा उनको एकल रचनाका आठ/आठ वटा गीत समावेश छन् भने हरिशरण सायमीको संगीत रहेको छ ।
भारतीय कलाकार जगदीश राजको निधन
साउन १४ - भारतीय कलाकार जगदीश राजको निधन भएको छ । बलिउडमा धेरैजसो प्रहरी निरिक्षकको भूमिका निर्वाह गर्ने चरित्र अभिनेता जगदीशको निधन भएको हो । अधिकांश चलचित्रमा प्रहरी निरिक्षकको भूमिका निभाएका उहाँले १ सय भन्दा बढी चलचित्रमा काम गर्नु भएको छ ।
गोविन्दले के ल्याए हावा सरीमा (भिडियो सहित)
काठमाडौं, साउन ८ – गायक गोविन्द ज्ञानीको नयाँ गीत ‘हावा सरी’ को म्युजिक भिडियो सार्वजनिक भएको छ । ‘ड्रिम अफ ब्ल्युज’मा समावेश यो गीतमा ज्ञानी आँफैले स्वर दिएका छन् भने नकुल कार्कीसँग मिलेर संगीत भरेका छन् ।
मिस ग्लोवल इन्टरनेशनलका सुन्दरीहरुको प्रतिभा (तस्बिरसहित)
काठमाडौं, साउन ६ - मिस ग्लोबल इन्टरनेशनल–२०१३ मा सहभागी सुन्दरीले आफ्नो प्रतिभा प्रस्तुत गरेका छन् । मोडल भिसाज् कन्सल्टेन्सीको आयोजना हुने प्रतियोगिताको तेस्रो संस्करणमा २८ युवती प्रतिस्पर्धामा छन् ।
दिपाले दिपकलाई भनिन् : केटोले गर्‍यो (फोटो फिचर)
अर्जुनकुमार संग्रौला/उज्यालो । काठमाडौं, साउन ६ - “जहाँ प्रहरीकी हुनेवाला श्रीमतीको समेत सुरक्षा हुदैन त्यहाँ अरु के सुरक्षित हुन सक्ला र ?” पाँचौ पटकसम्म कराउँदै उनले यही डाईलग बोलेपछि छैठौं पटकमा भने परबाट आवाज आयो ‘ओके’ ।
एनएफडिसी चलचित्र अवार्ड सम्पन्न, जीवन लुईंटेल सर्वोत्कृष्ठ अभिनेता
काठमाडौं, साउन ६ – एनएफडिसी राष्ट्रिय चलचित्र अवार्ड शनिबार सम्पन्न भएको छ । यो वर्षको अवार्डमा चलचित्र सायदले ७ विधामा पुरस्कार हात पार्न सफल भएको छ ।
नरदेवीमा खुल्यो चित्तधर संग्रहालय
काठमाडौं, साउन ५ – काठमाडौं नरदेवीमा कवि केशरी चित्तधर हृदय स्मृति संग्रहालय स्थापना भएको छ । संग्रहालयको संस्कृतिमन्त्री ऋद्धिबाबा प्रधानले उद्घाटन गर्नुभयो । काठमाडौंको नरदेवीमा रहेको नेपालभाषा परिषदको आफ्नै भवनमा संग्रहालय खोलिएको हो ।
बाढी पीडितको सहयोगका लागि मुक्तक वाचन हुने
काठमाडौं, साउन ५ – सुदूरपश्चिमका बाढी पीडितको सहयोगका लागि काठमाडौंमा आज मुक्तक वाचन कार्यक्रम हुँदैछ । नेपाल मुक्तक प्रतिष्ठानले ‘मुक्तक माहौल’ कार्यक्रम गर्न लागेको हो । कार्यक्रममा बरिष्ठ साहित्यकारले मुक्तक सुनाउने आयोजकले जनाएको छ ।
रेखा थापालाई फकाउने हिम्मत कस्को ? (भिडियो सहित)
काठमाडौं, साउन ३ - पेरिसडाँडामा भित्रिएको २ महिना नबित्दै नायिक रेखा थापाको साईनो रुखसँग गाँसियो । अघिल्लो हप्ता मनोरञ्जन समाचारमा यो नै सबैभन्दा चर्चित समाचार शीर्षक बन्यो ।
दुवै मृगौलामा समस्या देखिएका निर्देशक रेग्मीलाई सहयोग
काठमाडौं, साउन २ - चलचित्र पत्रकार संघले दुबै मृगौलाले काम गर्न छोडेपछि मृगौला प्रत्यारोपण गर्ने तयारीमा रहेका ख्यातिप्राप्त निर्माता निर्देशक शिव रेग्मीलाई ५० हजार रुपैयाँ आर्थिक सहयोग गरेको छ ।
मनाङमा ‘ग्राण्ड यार्तुङ’ को रौनक (फोटोफिचर सहित)
आश गुरुङ/उज्यालो । लमजुङ, साउन २ – मनाङको मनाङ गाउँमा यस अघि यार्तुङ पर्वको रुपमा मनाउँदै आएको पर्वलाई यो वर्ष स्थानीय बासिन्दाले ‘ग्राण्ड यातुर्ङ’ नाम दिएर मनाएका छन् ।
बाढी पीडितलाई सहयोग जुटाउन कलाकारको टोली युरोपमा
सन्तोष न्यौपाने /उज्यालो । बेल्जियम, साउन १ - नेपालका बाढी पीडितलाई सहयोग जुटाउन नेपाली कलाकारहरु यूरोप भ्रमणमा आउने भएका छन् । कलाकारहरु नन्दिता केसी, गरिमा पन्त, रिमा गुरुङ र मिङ्मा शेर्पा जुलाइ ३० मा युरोप आउने भएका हुन् ।
हंगामा मच्चाउँदै प्रमोद (तस्बिरसहित)
अर्जुनकुमार संग्रौला/उज्यालो । काठमाडौं, असार ३० – झमझम पानी परिरहेको छ । तर पानीको प्रवाह नगरी एक हुल केटाहरु हातमा धारिलो हतियारसहित निकै पुरानो देखिने पहेँलो कुर्ता लगाएका एक युवकलाई लखेट्दै ठुलो महलमा प्रवेश गर्छन् ।
राष्ट्रिय संगीत तथा नाटक महोत्सव सुरु
काठमाडौं, असार ३० – राष्ट्रिय संगीत तथा नाटक महोत्सव काठमाडौंमा सुरु भएको छ । नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानले शुरु गरेको महोत्सवको राष्ट्रपति डाक्टर रामवरण यादवले उद्घाटन गर्नुभयो ।
२ सय औं भानुजयन्तीमा विशेष कार्यक्रम ( फोटो फिचर)
काठमाडौ, असार २९ – २ सय औं भानुजयन्तीको अवसरमा काठमाडौमा गरिएको विशेष कार्यक्रममा स्रष्टाहरु दाहाल यज्ञनिधि र लिलबहादुर क्षेत्रीलाई सम्मान गरिएको छ ।
आज २ सय औं भानुजयन्ती
काठमाडौं, असार २९ - आदिकवि भानुभक्त आचार्यको २०० औं जन्मजयन्ती शनिवार विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाईंदैछ । भानुजयन्तीका अवसरमा उहाँको जन्मस्थान तनहुँसहित देशका विभिन्न ठाउँमा विशेष कार्यक्रम हुँदैछन् ।
भारतीय अभिनेता प्राणको निधन
असार २९ - चर्चित भारतीय अभिनेता प्राणको ९३ वर्षको उमेरमा निधन भएको छ । लामो समयदेखि बिरामी रहेका प्राणको मुम्बईको लिलावती अस्पतालमा शुक्रवार राती निधन भएको हो ।
एउटै फिल्ममा राजेन्द्र खड्गीका तीनपुस्ता
काठमाडौ, असार २७ – नेपालका चर्चित द्वन्द्व निर्देशक राजेन्द्र खड्गीका तीन पुस्तालाई एउटै पर्दामा देख्न पाइएको छ । चलचित्र ‘नथिङ इम्पोसिबल’मा राजेन्द्र, उनकी छोरी रागिनी र ९ बर्षे नाती आर्यन खड्गीलाई देख्न सकिन्छ ।
फोटो प्रतियोगिताका विजेतालाई पुरस्कार प्रदान
काठमाडौं, असार २६ - फोटो पत्रकार (पिजे) क्लबको आयोजनामा भएको आइएमई ग्लोबल–ग्लोबल आइएमई बैंक नेपाल फोटो कन्टेस्टका बिजेताहरुलाई वुधवार नगद पुरस्कार प्रदान गरिएको छ ।
निर्देशक रेग्मीका दुई वटै मृगौला निष्क्रिय
काठमाडौं, असार २६ - निर्देशक शिव रेग्मीको दुई वटै मृगौला निष्क्रिय भएका छन् । सफल निर्देशकको छवि बनाएका रेग्मीका मृगौलाले केही महिनाअघिदेखि काम गर्न छाडेको चलचित्र निर्माता संघका महासचिव केशव भट्टराईले जानकारी दिनुभयो ।
राजेश हमाल राजनीतिमा
काठमाडौ, असार २३ – कुशल अभिनेताबाट अब राजेश हमाल नेता बनेका छन्, त्यो पनि लामो कपाल पालेको फिल्मी स्टाइलको नेता । नेपाली चलचित्र क्षेत्रमा उनले लगभग तीन दशक राज गरे । अहिले उनी राजनीतिमा आएको कुराले सिने नगरी तताएको छ ।
बन्ने होइन त मिस इकलेज ? (आवेदन फारमसहित)
काठमाडौं, असार २२ - कलेजहरुमा अध्ययनरत १७ वर्षदेखि २२ वर्ष उमेर समुहका युवतीहरुबीचको सुन्दरी प्रतियोगिता मिस इकलेज २०१३ को आवेदन खुल्ला भएको छ ।
नयाँ भिडियोमा निमाको तेहरो रोल (भिडियो सहित)
अर्जुनकुमार संग्रौला/उज्यालो, काठमाडौ –यूट्युबमा हालै सार्वजनिक गरिएको नयाँ एल्बमको गीतको भिडियोमा गायक निमा रुम्बा बिभिन्न ब्याण्ड मेम्बरको भूमिकामा देखिएका छन् ।
पोखरामा आजदेखि ‘गन्धर्व गुञ्जन’
नवराज ढुंगाना/उज्यालो । पोखरा, असार २१ – पोखरामा आजदेखि ‘गन्धर्व गुञ्जन’ हुने भएको छ । नेपाल संगीत तथा नाट्य प्रज्ञा प्रतिष्ठान तथा पोखरेली युवा साँस्कृतिक परिवारको संयोजनमा गन्धर्वहरुको संगीत उत्सव हुन लागेको हो ।
हिंसा पीडित महिला र बाढी पीडितलाई राजेश पायलको सहयोग
काठमाडौं, असार १९ – गायक राजेशपायल राईले हिंसा पीडित महिला र बाढी पीडितलाई आर्थिक सहयोग गरेका छन् ।
जनकपुरमा नाट्य महोत्सवको तयारी पुरा
धर्बेन्द्र झा/उज्यालो, जनकपुरधाम, असार १९ – नेपाल संगीत तथा नाट्य प्रज्ञा प्रतिष्ठानको आयोजनामा पहिलो पटक जनकपुरमा हुन लागेको नाटय महोत्सवको तयारी पुरा भएको छ ।
हिन्दी चलचित्रमा नेपाली निर्देशक
काठमाडौ, असार १८ – नेपाली चलचित्र निर्देशक कमलकृष्णले अब मुलधारको हिन्दी चलचित्रको निर्देशन गर्ने भएका छन् । उनले भारतीय निर्माताद्वय इदरिस खान र अजर खानले निर्माण गर्ने ‘तेरे इश्क मे’ को निर्देशन गर्न लागेका हुन् ।
नेपाली मुर्तिकार विश्व कीर्तिमान राख्ने दौडमा
काठमाडौं, असार १६ - चौध वर्षको उमेरदेखि मुर्ति बनाउन सुरु गरेका मेघराज (अशेष) तिमिल्सिना आफ्नो प्रतिभा प्रदर्शन गर्दै विश्व रेकर्ड राख्ने दौडमा हिँडेका छन् । उनले आफूले आँखामा पट्टी बाँधेर मुर्ति बनाउन थालेको र अब विश्व रेकर्ड राख्ने तयारीमा रहेको बताए ।
जन्मदिनमा किरणले खोले सेक्रेट
अर्जुनकुमार संग्रौला/उज्यालो । काठमाडौं, असार १६ – ‘पचास हजारको मोबाईल बोक्न सकिन्छ, फेसन र स्टाइल देखाउन सकिन्छ भने वर्षमा एक पटक आफ्नो शरीरको चेकजाँचको लागि पाँच हजार खर्च गर्न सकिन्न ?’ रातामकै अर्थात किरण केसीको प्रश्न हो यो ।
दही चिउरा खाँदै स्रष्टालाई सम्मान
नवदीप अजनवी/उज्यालो । नुवाकोट, असार १५ - असार पन्ध्रको अवसरमा नुवाकोटमा दही चिउरा खादैं साहित्यिक गोष्ठी तथा स्रष्टा सम्मान गरिएको छ ।
पोखरामा खुल्यो ‘अन्तराष्ट्रिय रक्सीभट्टी’ (तस्बिरसहित)
पोखरा, असार १४ – पोखरा उद्योग वाणिज्य संघको सभाहलमा खचाखच भरिएको दर्शकको भिड, अन्तराष्ट्रिय रक्सी भट्टीलाई स्वागत गर्न आतुर थियो ।
कस्ता छन् वर्षका उत्कृष्ट फोटोहरु (फोटो फिचर)
काठमाडौ, असार १४ – ग्लोबल आइएमई बैङ्क नेपाल फोटो प्रतियोगिताको उपाधि शुक्रबार घोषणा गरिएको छ । प्रतियोगितामा शैलेन्द्र खरेलले खिचेको तस्बिरले फोटो अफ दि इयरको उपाधि जितेको छ ।